Polyurethane dahaarka Maro adag Fabric-saareyaasha & Shirkado - Shiinaha Polyurethane dahaarka Maro adag Fabric Warshad
Silicon Dahaarka Maro adag
Carbon Fiber Fiber
PTFE Maro adag Fabric
Polyurethane Dahaarka Maro adag
Aluminium Aluminium Maro adag
Acrylic dahaarka Maro adag Fabric
Maro Maro adag oo Silikoon ah
Maro adag Maro adag
0.4mm Silicon Dahaarka Maro adag
Maro Muusig Heerkulka Sare
Mashiinka Buluugga Kaarboon Buluugga ah
1k Carbon Fibre Maro
Dharka Fiber Kaarboonka aan toosnayn
Teflon Maro adag
Dharka Dahaarka leh ee Ptfe
Maro adag Dahaarka Acrylic
Acrylic Maro adag Fabric
Pu Polyester Fabric waa maro adag oo lagu dahaadhay Polyurethane, iyo walxo isku dhafan oo leh shaqooyin badan, naqshadeynta dharka maaddada fiber-ka ee PU dahaarka leh ayaa la qabsan kara meelo kala duwan. qabow, saliid, biyo, gabow iyo cimilo. Waxay sidoo kale leedahay shaqada bakteeriyada ka hortagga, waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa cadeynta caaryada, kuleylka-kuleylka iyo anti-ultraviolet.
Pu Dahaarka Maro adag Fabric Maro
Pu Coated Fiberglass Fabric Maro waa maro dabka ka sameysan oo lagu sameeyo daboolka polyurethane ololka celiya dusha sare ee maaddada fiberglass-ka oo leh teknolojiyad xoqan oo xoqan. Waxay leedahay codsiyo kala duwan iyo astaamo u adkaysta heerkulka sare, kuleylka, dabka, biyaha iyo shaabadda hawada.
Pu Maro Dahaarka Maro adag
Pu Coated Fibreglass Maro waa maro aan dabka ka samaysanayn oo lagu sameeyay daboolka polyurethane ololka dabka dushiisa marada malayga oo leh teknoolojiyad xoqan oo xoq ah. Waxay leedahay codsiyo kala duwan iyo astaamo u adkaysta heerkulka sare, kuleylka, dabka, biyaha iyo shaabadda hawada.
Maro Anti Fasaasado Maro
Anti Corrosion Fibreglass Maro waa maro aan dabka ka samaysanayn oo lagu sameeyo daboolka polyurethane ololka celiya dusha sare ee maaddada fiberglass-ka oo leh tiknoolajiyad xoqan. Waxay leedahay codsiyo kala duwan iyo astaamo u adkaysta heerkulka sare, kuleylka, dabka, biyaha iyo shaabadda hawada.
Maro Maay ah oo Lagu Daweeyey Maro adag oo Maaybaar ah
Maro Maro adag oo la daweeyey Maro adag waa maro marna dabka ka samaysan oo lagu sameeyo daboolka polyurethane ololka dabka dusha sare ee maro fiberglass leh tiknoolajiyada xoqida xoqida. Waxay leedahay codsiyo kala duwan iyo astaamo u adkaysta heerkulka sare, kuleylka, dabka, biyaha iyo shaabadda hawada.
3m Fiber Maro
3m Fiber Maro waa maro aan dabka laga celin karin oo lagu sameeyay daboolka polyurethane ololka dabka dushiisa marada maroobada oo leh tiknoolajiyada xoqida xoqida. Waxay leedahay codsiyo kala duwan iyo astaamo u adkaysta heerkulka sare, kuleylka, dabka, biyaha iyo shaabadda hawada.
Maro adag oo adag oo loo yaqaan 'Fiberglass Maro' ayaa laga sameeyaa maro hoose oo maroodi ah oo la miiro ama la dahaadho hal dhinac ama labada dhinacba iyada oo leh caag silikoon ah oo si gaar ah isugu dartay. Sababtoo ah cilladaha jireed ee silicone, ma aha oo kaliya kordhinta xoogga, kuleylka kuleylka, dabka, dabka, guryaha, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay caabbinta ozone, gabowga oksijiinka, gabowga iftiinka, da'da cimiladeed, caabbinta saliida iyo guryaha kale.
Pu Dahaarka Polyester Fabric
Pu Coated Fiberglass Fabric Maro waa dhar muraayada oo waxqabad sare leh oo lagu daboolay tiknoolajiyad sare oo gaar ah oo polyurethane polymer ah .Dhaxgalka noocan ah ee dhammeystiran wuxuu u adkeysan karaa heerkulka illaa 180 ℃ ee dilaacyada gaagaaban. Waxay leedahay iska caabin abrasion aad u wanaagsan iyo iska caabin wanaagsan oo saliidaha iyo dareeraha ah.Mid dhinac / labalaab dhinac polyurethane ah oo dahaarka marada marooyinka leh midabbo badan iyo ballac ayaa la heli karaa.
Pu Fiberglass Maro
Maro adag oo lagu dahaadhay maro PU waa maro aan dabka laga celin karin oo lagu sameeyay daboolida polyurethane olol olol leh dusha sare ee maaddada fiberglass-ka oo leh tiknoolajiyad xoqan. Waxay leedahay codsiyo kala duwan iyo astaamo u adkaysta heerkulka sare, kuleylka, dabka, biyaha iyo shaabadda hawada.
No.8 Tianxiu ST Tiedong RD Beichen DT Tianjin Shiinaha
Soo bandhigida dharka marada kaarboon kaarboon iyo sifooyinka
Waxyaabaha Cusub ee dharka Maro adag ee loo yaqaan 'Teflon'
Tianjin Cheng Yang Products kulul ee Silico ...
Maro Maro ah, Maro adag Dahaarka Acrylic, Acrylic dahaarka Maro adag Fabric, Aluminized Maro adag, Pu Dahaarka Maro adag Fabric Maro, Maro adag Maro adag,